Inrico TM-9 4G / WiFi IRN मोबाइल नेटवर्क रेडियो - नेटवर्क रेडियो
घर / रेडियो / नेटवर्क रेडियो / Inrico TM-9 4G / WiFi IRN मोबाइल नेटवर्क रेडियो
रेटेड 4.005बाहिर आधारित 1 ग्राहक दर्जा
TM-7 सँग तुलना गरेर नयाँ के छ:
लाउडस्पीकर ठूलो र क्रिस्टल खाली छ
११०V / २२०V पावर सप्लाई (१२ वीडीसी / A ए) ($69)
कम्प्याक्ट W डब्ल्यू बाह्य वक्ता ($99)
अल्ट्रा स्लिम प्रोग्रामिंग ब्लूटूथ कीबोर्ड ($99)
12V सिगरेट लाइटर पावर एडाप्टर ($69)
Inrico TM-9 4G / WiFi IRN मोबाइल नेटवर्क रेडियो मात्रा
SKU: टीएम-9 विभाग: मोबाइल नेटवर्क रेडियो, नेटवर्क रेडियो
Inrico TM-9, TM-7 Plus को विकास हो, एक उत्तम विक्रेता नेटवर्क रेडियो।
नयाँ साथ एमेच्योर रेडियो प्रयोगको लागि महान IRN प्लेटफर्म, Zello को लागी, टीम Speak3र Echolink 3G वा WiFi मार्फत। र यसले वाइफाइ हटस्पटको रूपमा पनि काम गर्दछ!
के यो अझै हाम्राडियो छ? यो पढ्नुहोस् लेख। TM9 लाई पुलिस, फायर डिपार्टमेन्ट र अन्य धेरै प्रसारणहरू सुन्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कसरी सिक्नुहोस्.
यो पनि APRS का साथ पूर्ण रूपले उपयुक्त छ। यसमा थप जान्नुहोस् APRS स्थापना गर्दै Inrico TM-9 मा।
Inrico TM-9 एक नेटवर्क रेडियो हो। योसँग VHF वा UHF RF मोड्युल छैन।
In चीजहरू जान्नुहोस् जुन तपाइँ ईन्रिको टीएम सीरीज ट्रान्सीभरसँग गर्न सक्नुहुन्छ
यस नेटवर्क रेडियो संस्करण पूर्ण रूपमा उपयुक्त छ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नेटवर्क (IRN)
ह्याम रिपीटरहरूमा प्रसारण गर्न, तपाईंले मान्य hamradio लाईसेन्स राख्नु पर्छ। IRN मा यो रेडियो प्रयोग गर्नका लागि तपाईले अनुसरण गर्नु पर्छ यी चरणहरू र त्यस पछि कन्फिगर गर्नुहोस् अडियो सेटिंग्स। अन्तर्गत रेकर्ड ट्याब, चयन गर्नुहोस् "माइक"र तपाइँ सबै सेट हुनुहुन्छ।
तपाईं साधारण प्रकारको अनुसरण गरेर, तपाईंलाई मनपर्ने कुनै प्रकार्यमा कुञ्जी बटन प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ प्रक्रिया। साथै, यो पढ्नुहोस् लेख, यदि तपाईं फरक माइक्रोफोन प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने।
के हुन्छ यदि तपाईं आफ्नो फोनमा वाकी टॉकी अनुप्रयोग राख्न सक्नुहुनेछ? हामी तपाईंलाई अहिलेसम्म बनाएको सब भन्दा राम्रो वाकी टाकी अनुप्रयोगको परिचय दिन्छौं: जेलो एन्ड्रोइड, आईफोन, आईओएसको लागि वाकी टाकी अनुप्रयोग हो र त्यहाँ पीसीको लागि जेलो पनि छ।
यस रेडियोजस्तो स्मार्टफोनसँग एउटा PTT छ जसले ट्रान्समिटरको कुञ्जी गर्दछ। जहाँसम्म तपाईंसँग डेटाप्लान वा वाइफाइ जडान छ, तब तपाईंसँग विश्वव्यापी दायराको साथ दुई तर्फी वाकी टाकी अनुप्रयोग छ।
पहिले, Zello अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसो भए, तपाईंको zello PTT बटन मात्र थिच्नुहोस् र तपाईं सुन्नुहुनेछ!
बुद्धिमान जीएसएम इंटरकॉम + स्टीरियो स्पिकरहरू
GPS + कम्पास सटीक नेभिगेसन र स्थिति
■ गुगल खोजी र नक्सा
लागि 1 समीक्षा Inrico TM-9 4G / WiFi IRN मोबाइल नेटवर्क रेडियो
एन्ड्रयू नगले (प्रमाणित मालिक) - डिसेम्बर 6, 2020
करीव एक महिनाको लागि यो रेडियो प्रयोग गरे पछि, म यसको प्रदर्शन संग खुशी छु। यो पूर्ववर्ती भन्दा काफी छिटो फुट्छ, ब्याकलिट बटनहरू थिए, र राम्रो गुणको स्पिकर। यद्यपि यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले रेडियोमा राम्रोसँग काम गर्नको लागि एन्टेना संलग्न गर्न आवश्यक पर्दछ।
Inrico T298s 3G / Wifi (एन्ड्रोइड अनलक)
Inrico T320 4G / Wifi + BT Handheld माइक्रोफोन + अतिरिक्त ब्याट्री
बिक्री! $349 $299 विकल्पहरू चयन गर्नुहोस्